Jonga le Fowuni yokuSebenza! | Martech Zone
Jonga le Fowuni yokuSebenza!
NgoLwesine, Julayi 10, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 30, 2012 Douglas Karr
Ukuba ufunda le posi kwi-feed yam okanye nge-imeyile, qiniseka ukucofa uqhubeke iposti yomnxeba!
Omnye wemiceli mngeni kwi Icandelo lokutyela isebenza nabantu abangenalo ixesha lokuvavanya ukuthengisa kwabo okanye ukudlala ngetekhnoloji rhoqo njengoko kufanelekile. Ngombulelo, uMlawuli wethu weNtengiso, uMarty Bird, unceda abathengi bethu ukuba bavale lo msantsa ngeeleta zenyanga ezipakishwe ngolwazi.
Kwileta yethu yakutshanje, uMarty uthethe ngokubaluleka komnxeba wokuthatha amanyathelo. Ukuba unephepha elinye kwiwebhusayithi yakho, okanye i-imeyile enye ephumayo, ngaphandle kokubizelwa inyathelo-uyaphoswa lithuba lokuguqula abanye abathengi.
Abanye abantu bacinga ukuba ukufowunelwa zilula nje, kodwa kuyasebenza. Basebenza kumanqanaba aliqela.
Izizathu ezi-3 zokuba kutheni iiCall to Action Work:
ezimqoka -Ukuba iphepha lakho lenzelwe kakuhle, ngaphandle kweziphazamiso, umnxeba oya kuthi uthathele ingqalelo abathengi-uyenze icace gca indawo abanokucofa kuyo ukuze bakhuphele, bakhuphele, babhalise, njl njl. kuba abazi ukuba mabacofe phi ngokulandelayo.
iinketho Ngokubaluleke kangako, iindwendwe zihlala ziza kwindawo yakho kuba ziye zaya kukhangela, kubalulekile ukubanika indlela yokuqhubeka nolwalamano lwakho. Banokuthi bayifumane into abebeyifuna, kodwa ukubanika enye into kunokubenza bangabuyi!
Inqwenela -Kukho ipesenti ethile yabasebenzisi abathanda nje ukucofa izinto. Ukubonelela ngomnxeba obukhaliphileyo onokubanika ithagethi abayifunayo. Ukongeza, kunokuzisa intengiso entsha.
Ukuba umnxeba oya kusenzo nge-callout enesibindi awukho kuluhlu lwakho lokutshekisha xa usenza iwebhusayithi okanye i-imeyile, qiniseka ukuyongeza namhlanje.
Jul 28, 2008 ngo-4: 49 AM
Ingcebiso enkulu. Kwisihloko somxholo we-imeyile ndikufumanisa oku kusisixhobo esiluncedo ngokwenene, kunye neengcebiso ezininzi kunye namanqaku anokuqonda:
Jul 28, 2008 ngo-9: 36 AM
Ndongeze oovimba kuGoogle Knol endibhalileyo kwiNtengiso ye-imeyile!